जीवनभर भाडामा बस्दै आएका शिक्षकलाइ विद्यार्थीले दिए घर गुरुदक्षिणा ! - साँचो खबर
जीवनभर भाडामा बस्दै आएका शिक्षकलाइ विद्यार्थीले दिए घर गुरुदक्षिणा !
जीवनभर भाडामा बस्दै आएका शिक्षक पशुपतिलाल कर्ण अचेल निकै खुसी छन् । आफ्नै पूर्वविद्यार्थीले गुरुदक्षिणास्वरूप घर निर्माण गरिदिएपछि कर्णका आँखामा हर्षका आँसु टलमलाएका छन् । खल्तीबाट रुमाल झिकेर आँसु पुछ्दै उनले भने, “आज मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन हो । मैले मेरा शिष्यबाट गुरुदक्षिणा प्राप्त गरेँ।”